Imaaraatka oo xaalada kuxuntahay | Wardoon
Home Somali News Imaaraatka oo xaalada kuxuntahay
Imaaraatka oo xaalada kuxuntahay
Maamulka madaxweyne Joe Biden ee Mareykanka ayaa Imaaraadka Carabta u qabtay in laba mid doortaan, xilli uu kordhayo khilaaf soo kala dhex-galay labada dowladood.
Washington ayaa Abu Dhabi u sheegtay inay qalabka shirkadda Shiineeska ay Huawei ka saarto shabakadaheeda afarta sano ee soo socoto gudahood, haddii kale la baabi’in doono heshiiska ay kula jirta Washington ee ay ku iibsaneyso diyaaradaha dagaalka F-35 iyo kuwa drones-ka.
Helitaanka diyaaradahaas ayaa aheyd sababta ugu weyn ee Imaaraadka ay u caadiyeeyeen xiriirka Israel, hase yeeshee waxaa hadda muuqata in Mareykanka uu la yimid shuruud cusub oo adag.
Mareykanka ayaa dalbaday in dhammaan qalabka ay sameysay shirkadda Huawei laga furo shabakadaha sigaarsiinta iyo internet-ka Imaaraadka Carabta kahor 2026 ama 2027, oo ah xilliga la qorsheeyey in diyaaradaha dagaalka F-35 ee Mareykanka sameeyo loo daabulo Imaaraadka Carabta.
Washington ayaa sheegtay in shirkadda Huawei, oo ah tan ugu weyn Shiinaha ee bixisa agabyada loo adeegsado habka isgaarsiinta ee 5G, loo isticmaalo inay u jaajuusto xisbiga shuuciga ah ee China. China waa ay beenisay eedeymahaas.
Saraakiisha Imaaraadka Carabta ayaan diidin dalabka ka yimid Washington, hase yeeshee waxay sheegeen inay u baahan yihiin waqti dheeraad ah oo ay ku helaan beddel macquul u ah Huawei, sida ay ilo-wareedyo xog-ogaal ah u sheegeen warbaahinta Bloomberg.
Tani waa hanjabaaddii labaad oo Imaaraadka Carabta uga timaada Washington. Bishii tagtay, warar soo baxay ayaa sheegayey in heshiiska diyaaradaha F-35 oo ku kacaya balaayiin dollar uu halis ugu jiro wada-shaqeyn amni oo dhex-mareysa Beijing iyo Abu Dhabi. Lama magacaabin Huawei xilligaas.
Muranka la xiriira Huawei ayaa soo billowday xillihii madaxweyne Trump. Hase yeeshee Trump ayaa inkasta oo uu dalbanayey in Abu Dhabi ay xiriirka u jarto Huawei, wuxuu haddana Imaaraadka u ogolaaday inay iibsato diyaaradaha F-35, sababo la xiriira heshiiska ay la galeen Israel.
Si kastaba, madaxweyne Biden ayaa markii uu talada qabtay ku dhowaaqay inuu dib u eegayo iibka diyaaradaha, ayna suurta-gal tahay in Imaaraadka aysan helin, sababo la xiriira xiriirka kala dhaxeeya Huawei.
Imaaraadka ayaa hadda waxaa haysta laba daran mid dooro, sababtoo ah China waa dalka uu kala dhaxeeya xiriirka ganacsi ee ugu ballaaran oo sanadkii lasoo dhaafay lagu qiimeeyey $53 bilyan, mana sahlan inay xumeyso, halka ay sidoo kalena aad ugu baahan tahay diyaaradaha F-35.
Previous articleDAAWO:-Rooble Farmaajo iyo Kheyre way ii siman yihiin
Next articleWeerar sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay Dhuusamareeb
Fanaanadii Khadra Daahir Cige oo caawa Hargeysa ku geeriyooday
DAAWO:-Wariyayaal 4 bilood xiRnaa oo xabsiga laga siidaayay
Golaha wakiilada Somaliland oo gudbiyay Mooshin
Yuusuf dabageed Oo Gaaray Baladweyne +SAWIRRO
Jabhada Tigreega oo la wareegay Mekelle